यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने जिम्मा तपाईं हाम्रै हो–गीता अधिकारी – Ramro Sandesh यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने जिम्मा तपाईं हाम्रै हो–गीता अधिकारी – Ramro Sandesh
यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने जिम्मा तपाईं हाम्रै हो–गीता अधिकारी
मोरङ जिल्लाको केराबारीमा बुबा पदमप्रसाद अधिकारी र माता यमकुमारी अधिकारीका चार सन्तान मध्ये कान्छी गीता अधिकारी काठमाडौलाई कर्मथलो बनाएर पत्रकारिता गरिरहनुभएको छ । २०६१ सालमा मानचित्र मासिकबाट पत्रकारिता शुरु गरेकी गीताले विशेषगरी कला मनोरञ्जन पत्रकारितामा आफूलाई संलग्न गराउँदै आउनुभएको छ । उहिलेसम्म आउँदा यस क्षेत्रमा उहाँको नामले दिनप्रतिदिन उचाई प्राप्त गरिरहेको छ । नयाँ विमर्श साप्ताहिकलगायत आधा दर्जन साप्ताहिक पत्रिका, छापा खबर मासिक र मध्यान्न दैनिक हुँदै कमाण्डर पोष्ट दैनिकमा पत्रकारिता गर्नुभएकी गीता हाल फिल्मी खबर साप्ताहिकमा सह–सम्पादक र मिलाप म्याग्जिनका साथै मिलाप न्युज डट कमकी कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ । त्यस्तै उहाँ मिलाप फाउण्डेशनकी अध्यक्ष रहेर विभिन्न सामाजिक कार्यमा आफूलाई संलग्न गराउँदै आउनुभएकी गीता अधिकारीसँग अरबिन्द्र गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः–
मेरो पेसा पत्रकार भएकोले त्यही सम्बन्धी काम मै संलग्न छु । र हामीले मिलाप फाउण्डेशन मार्फत विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएका छौ । यसमा रहेर समाजसेवा तर्फ पनि आफूलाई व्यस्त बनाउँदै आएकी छु भन्नुपर्ला ।
० तपाईं आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
म आफु लाई चलचित्र पत्रकारको रुपमा चिनाउन चाहन्छु । काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने फिल्मीखबर साप्ताहिक, मिलाप मासिक र अनलाइन पत्रिकामा काम गर्छु भने चलचित्र पत्रकार सङ्घको सदस्यभएकाले त्यसका कामहरुमा पनि आफूलाई संलग्न गराउदै आएको छु । त्यस्तै महिला हिंसा, गीत सङ्गीत र अन्य विषयहरुमा काठमाडौंबाट प्रकाशितहुने दैनिक अखबारहरुमा स्वतन्त्र लेखकको रुपमा पनि कलम चलाइरहेको हुन्छु । यस्तै यस्तै ।
० गीता अधिकारी को हो ?
समाजले दिएको एउटा नाम । असंख्य मानिसहरुको भिँडमा पहिचानको लागि दिइएको संज्ञा वा नाम मात्र हो । आमा बुबाकी छोरी र कर्मक्षेत्रमा जुनुसुकै बेला पनि खटिने एउटा स्वतन्त्र पत्रकार नै गीता अधिकारी हो ।
० तपाईं गीत पनि लेख्नुहुन्छ, हैन ? अनि कथा, कविताहरू पनि प्रकाशित भएको पाइन्छ नि !
हो, कहिले काही मनको भावनाहरु लेख्ने गर्छु । गीत लेख्दा मनमा एक खालको सुखानुभूति अनुभव गर्छु म । कथा, कविताहरुमा पनि कलम चलाएको छु । तर, म आफुलाई त्यस क्षेत्रको विद्यार्थी भन्दा पनि एउटा पत्रकारको रुपमा नै चिन्दछु ।
० साहित्य के हो ?
म त्यस्तो साहित्यकार त होइन माथि पनि भने म पत्रकार हो । मलाई लाग्छ साहित्यको सीमित घेरा हुँदैन अथवा साहित्यको परिभाषालाई सीमित गर्नुहुँदैन । यद्यपि, भावनालाई अक्षरमा उतार्ने माध्यम नै साहित्य हो ?
० किन लेखिन्छ ?
आफूभित्रको अनुभूतिलाई व्यक्तगर्न नै साहित्य लेखिन्छ । साहित्य लेखन स्वःस्फूर्त आउने अभिव्यक्ति हो । र, यो आत्मरतिका लागि पनि लेखिन्छ ।
० तपाईं गीत, कविता, कथा र लेखहरू लेख्दा कस्ता विषयवस्तु खोज्नुहुन्छ ?
विविध विषय । शान्ति, वेदना, पीडा, राजनीति, महिला हिंसा, गीत–सङ्गीतका अन्वेषणहरू र समसामयिक ।
० लेखेर पाइने र नपाइने के हो ?
शान्ति पाइन्छ, आत्म सन्तुष्टि पाइन्छ तर खान पाइँदैन ।
० जीवन प्रतिको तपाईंको दृष्टिकोण ?
अझै धेरै देख्न र भोग्न नै बाँकी छ जस्तो लाग्छ । तर, मैरो आजसम्मको भोगाइमा जीवन सङ्घर्ष, सङ्घर्ष नै जीवन हो ।
सञ्चारकर्ममा क्रियाशिल रुपमा खटिनुभएको तपाईंले अर्को सञ्चारकर्मीसँग गर्नुभएको कुराकानीमा आज फरक अनुभुति भयो । हामी एउटै क्षेत्रमा छौ । यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने जिम्मा तपाईं हाम्रै हो । तपाईंको यस सञ्चार माध्यमको लोकप्रियता अझ बढेर जाओस्, कामना गर्दछु । जिम्मेबार पत्रकारितामा अग्र भागमा रहेर अझ सक्रिय भएर लाग्नुहोस् भन्न चाहन्छु । धन्यवादका साथै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यो समय र संवादका लागि । –नव क्षितिज साप्ताहिकबाट
राजु बिरहिको निर्देशनमा बज्रपात
श्री सवस्वती मा.विको ४२ औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस सम्पन्न